Wadooyin loo sameynayo d/ xeebaha PL
27 Jun 27, 2012 - 8:06:58 AM
Hayada Wadooyinka Puntland ayaa shaaca ka qaadey inay bilaabeyso mashruuc wadooyin loogu sameynayo qaar kamida degmooyinka dhaca xeebaha Puntland waxana ay kala yihiin Baargaal ,Xaafuun ,Eyl iyo Jariiban.
Shir saxaafadeed uu ku qabtey xafiiskiisa Garowe maanta 27 June,2012 agaasimaha hayada wadooyinka Puntland(Puntland High Wey Authority) Eng.Xasan Cismaan Cali ayuu sheegey in dhaqso loo bilaabi doono mashruucan wadooyinka loogu sameynayo degmooyinka laamiga ka fog oo ku yaal xeebaha Puntland.
Waxa uu raaciyey agaasimuhu in mashruucan ay ku deeqdey dhaqaalihiisa dowladda Maraykanku islamarkaasina ay soo marsiineyso hayada DIA oo ah mid kamida hayadaha samafalka ee dalka ka hawlgala. Eng.Cismaan sidoo kale waxa uu ka hadlay qorshaha hayadiisa ay ka damacsantahay dayactirka wadada laamiga ah ee magaalooyinka waaweyn isku xirta oo uu cadeeyey in intii tabartooda ah ay hagaajinyaan isagoona ku darey in haatan WFP ay hawlo ka wado qaar kamida wadooyinkaasi.
Mashruucan wadooyinka loogu sameynayo deegaan xeebeedyada Puntland ayaa ah mid lagu dhiirigelinayo dadka deegaanka oo ku guuleystey inay iska saaraan kooxihii burcad badeeda ah oo horey deeganadooda u dhigtey fariisinada.
Halkan ka dhagyeso codka agaasimaha hayada PUNHA Eng.Xasan More Articles
Xildhibaano ka laabtay Mooshin
EDITORS PICK: Somalia: AMISOM begins house searches in Mogadishu: spokesman
MOGADISHU, Somalia May 21, 2013 (Garowe Online) Somaliland leader hosts EU Special Envoy to Somalia in Hargeisa
Somalia: Jubaland gains support, as federal gov’t rejects outcome More